News | प्रशिक्षक
News | Tag: प्रशिक्षक
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीकाे मुख्य प्रशिक्षकमा अष्ट्रेलियाका डेभ वाटमोर नियुक्त
काठमाडौँ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षकमा अष्ट्रेलियाका डेभ वाटमोर नियुक्त भएका छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले वाटमोरलाई राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो ।
प्रिमियर लिगमा यी तीन क्लबका प्रशिक्षक छन् उच्च दबाबमा
एजेन्सी । प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु भएको एक महिनामात्र भएको छ । हालसम्म चार खेल भएको छ भने कतिपय क्लबले तीन खेलमात्र खेलेका छन् । तर, नाम चलेका क्लबको खेल भने खासै सन्तोषजनक रहेको छ ।
म्यानचेस्टर युनाइटेडमा ओरालो लाग्यो प्रशिक्षक ओले गनरको रणनीति !
एजेन्सी । यस सिजन पनि म्यानचेस्टर युनाइटेडले सोचेजस्तो सुरुवात गर्न सकिरहेको छैन । गएको सिजन शिर्ष चारमा पर्न सकेको म्यानुले यस सिजनको सुरुवातमै खराब खेल प्रदर्शन गरेको छ ।
युरोपको चर्चित ५ लिगबाट जारी सिजनमै २८ प्रशिक्षक बर्खास्त
एजेन्सी । सिजन २०१९–२० को मध्यतिर आइपुग्दा युरोपका चर्चित पाँच लिगबाट २८ प्रशिक्षक बर्खास्त भइसकेका छन् । इंग्ल्याण्डको प्रिमियर लिग, स्पेनको ला लिगा, जर्मनको बुन्डेसलिगा, इटालीको सिरी ए तथा फ्रान्सको लिग वानका क्लबहरुबाट ती प्रशिक्षकहरु बर्खास्त भएका हुन् ।
विश्वको उत्कृष्ट प्रशिक्षक को ? यसो भन्छन् फुटबलप्रेमी
एजेन्सी । कुनै क्लबलाई सफल बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा फुटबल प्रशिक्षकको हातमा हुन्छ । यदी प्रशिक्षकले भएका स्रोत तथा साधनलाई राम्ररी प्रयोग गरेको खण्डमा खेलको नतिजा नै तलमाथि बनाइदिन्छ । त्यसैले हरेक क्लबले प्रशिक्षक चयन गर्दा राम्रो विचार पुर्याउँछन् । तर, कोही प्रशिक्षकले राम्रो खेल प्रस्तुत गरेर राम्रो नतिजा ल्याउँछन् भने कोही प्रशिक्षक नतिजाप्रति विश्वास गर्छन् ।
यी चर्चित फुटबल प्रशिक्षक जसलाई काम चाहिएको छ
एजेन्सी । कुनै पनि टिमको सफलतामा प्रशिक्षकको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ । कुन टिमविरुद्ध कस्तो खेल खेल्ने भन्ने कुरा प्रशिक्षकले नै निर्णय लिन्छ । त्यति मात्रै होइन प्रशिक्षकले कुन खेलाडीलाई खेलाउने तथा कसलाई बेन्चमा राख्ने भन्ने कुराबारे पनि निर्णय लिन्छ । यदी प्रशिक्षक आफ्नो काममा सफल भयो भने उसको तारिफ हुन्छ अन्यथा उसको सानो गल्तीले पनि टिमले नराम्रो नतिजा ल्याउन सक्छ ।